ကာမအလှူ ( ၂၀၁၃ ) : HIV Opportunistic infections အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကူးစက်လာတဲ့ ရောဂါတွေ
HIV Opportunistic infections အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကူးစက်လာတဲ့ ရောဂါတွေ
ကျွန်တော့်ရဲ့ တံတောင်ဆစ်အတွင်းဘက်မှာ အနီစက်လေးတစ်ခု ပေါ်နေပါတယ်ဗျ။ နည်းနည်းကြာပြီထင်တယ်ဗျ။ အဲဒါက AIDS ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ ဟုတ်မဟုတ် သိချင်ပါတယ်။ တခြားလက္ခဏာတွေတော့ ဘာမှမဖြစ်ဖူးပါဘူး။
လူတိုင်းရဲ့ ကိုယ်ပေါ်မှာနဲ့ ကိုယ်တွင်းမှာ Germs ပိုးမျိုးစုံရှိနေတယ်။ Bacteria (ဗက်တီးရီးယား)၊ Protozoa (ပရိုတိုဇိုးဝါး)၊ Fungus (ဖန်းဂပ်စ်) နဲ့ Viruses (ဗိုင်းရပ်စ်) တွေဖြစ်ကြတယ်။ Immune System ခုခံအား အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်နေသမျှ ရောဂါဘယ မရစေပါ။ HIV ကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် တချို့ဆေးဝါးတွေကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ခုခံအားနည်းလာပြီး ရောဂါရစေနိုင်တယ်။ ဒီလိုအခွင့်ကောင်း (အခွင့်ဆိုး) ကိုယူပြီး ဝင်တာတွေကို HIV Opportunistic Infections (OIs) လို့ ခေါ်ပါတယ်။
အများဆုံးဖြစ်တဲ့ အခွင့်ကောင်းယူ ကူးစက်ရောဂါတွေက အရင်လောက် မဆိုးတော့ပါ။ Antiretroviral Therapy (ART) ဆေးတွေကနေ အများကြီး သက်သာရာရစေတယ်။
1. Candidiasis (Thrush) မှက္ခရုရောဂါ၊ ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ (ဗဂျိုင်းနား) တွေမှာ (ဖန်းဂတ်စ်) ပိုးတမျိုးကြောင့် အနာတွေ ဖြစ်တယ်။
2. Cytomegalovirus (CMV) မျက်စိကိုထိခိုက်တဲ့ (ဗိုင်းရပ်စ်) ရောဂါဖြစ်တယ်။ မျက်စိကွယ်စေနိုင်တယ်။ 3. Herpes simplex ရေယုံဟာ (ဗိုင်းရပ်စ်) ကနေဖြစ်စေတယ်။ တခြားနေရာတွေမှာရော လိင်လမ်းမှာပါဖြစ်တယ်။ 4. Malaria ငှက်ဖျား
5. Mycobacterium avium complex (MAC or MAI) (ဗက်တီးရီးယား) ကနေဖြစ်တယ်။ ဖျား၊ အားယုတ်၊ အစာမကျေ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျမယ်။
6. Pneumocystis pneumonia (PCP) (ဖန်းဂတ်စ်) ရောဂါတမျိုးဖြစ်တယ်။ ဆိုးဝါးတဲ့ (နူမိုးနီးယား) ဖြစ်စေတယ်။
7. Toxoplasmosis (Toxo) (ပရိုဇိုးဝါး) ပိုးကနေဖြစ်စေတယ်။ ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်တယ်။
8. Tuberculosis (TB) တီဘီ
9. အမျိုးသမီးတွေမှာ (ဗဂျိုင်းနား) မွေးလမ်းကြောင်း နေရာကနေ စတာများတယ်။ Pelvic Inflammatory Disease (PID) တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါတွေ ရောင်ခြင်း နဲ့ Bacterial Vaginosis (ဗဂျိုင်းနား) မှာ (ဗက်တီးရီးယား) ကြောင့် ရောင်ခြင်းတွေ အဖြစ်များတယ်။
စမ်းသပ်မှု လုပ်နိုင်တယ်။ သတိထားဘို့က HIV tests positive အပေါင်းဖြစ်သူတိုင်းကို စမ်းသပ်ရင် လူအများစုမှာ Cytomegalovirus (CMV) အပေါင်းပြနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရောဂါရတဲ့အဆင့်အထိ မရောက်တာက များတယ်။ စိုးရမ်စရာ မလိုတတ်ပါ။ CD4 cell count စစ်လို့ 50 ထက်နည်းသူတွေမှာသာ ဒီရောဂါရတယ်။ ဒီလို သွေးစစ်တဲ့အခါ Antigens (အင်တီဂျင်) တွေ့ရင် ပိုးအဝင်ခံထားရတယ်။ Antibodies (အင်တီဘော်ဒီ) တွေ့ရင် ရောဂါအဆင့် ရောက်နေတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။
HIV Opportunistic infections (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ) ရှိနေစဉ် အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကူးစက်လာတဲ့ ရောဂါတွေအတွက် ဆေးများ
Randomized Controlled Trial (RCT) ဆေးကုသနည်းတွေရဲ့ ထိရောက်မှုကို စနစ်တကျ လေ့လာမှုပြုလို့ ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်များ
(၁) Beneficial (ဗက်တီးရီးယား) တွေအတွက် အကျိုးရှိတဲ့ ဆေးတွေ၊
• Aciclovir for Herpes simplex and Vericella zoster virus ရေယုံအတွက် ဆေး၊
• TMP/SMX (Trimethoprim/Sulfamethoxazole), Co-trimoxazole for Pneumocystis cartil pneumonia (PCP) (နူမိုဆစ်စ်တစ်-ကာတဲလ်-နူမိုးနီးယား) အတွက်ဆေး၊
• Tuberculosis prophylaxis တီဘီ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊
(၂) Likely to be beneficial အကျိုးရှိနိုင်လောက်တဲ့ ဆေးတွေ၊
• Atovaquone (Dapsone or Aerosolised pentamidine) for PCP (နူမိုဆစ်တစ်-ကာတဲလ်-နူမိုးနီးယား) အတွက်ဆေး၊
• Azithromycin for Mycobacterium avium complex (MAC) (မိုင်ကိုဘက်တီးရီယမ်-အေဗီယမ်) ပိုးဝင်ခြင်း အတွက်ဆေး၊
• Azithromycin for PCP (နူမိုဆစ်တစ်-ကာတဲလ်-နူမိုးနီးယား) အတွက်ဆေး၊
• Clarithromycin for MAC (မိုင်ကိုဘက်တီးရီယမ်-အေဗီယမ်) ပိုးဝင်ခြင်းအတွက်ဆေး၊
• Clarithromycin, Rifabutin and Ethambutol for MAC in people with previous MAC (မိုင်ကိုဘက်တီးရီယမ်-အေဗီယမ်) ပိုးဝင်ခြင်း ထပ်ဖြစ်သူများအတွက်ဆေး၊
• Ethambutol, Clarithromycin, Clofazimine for MAC in people with previous MAC (မိုင်ကိုဘက်တီးရီယမ်-အေဗီယမ်) ပိုးဝင်ခြင်း ထပ်ဖြစ်သူများအတွက်ဆေး၊
• Itraconazole for Penicillium marneffel (ပင်နဆီလီယမ်-မာနက်ဖဲလ်) ပိုးအတွက်ဆေး၊
(၃) Trade off treatment မသုံးတော့သည့် ဆေးများ
• Rifabutin + either Clarithromycin or Azithromycin for MAC
• Fluconazole or Itraconazole for Fungal diseases
• INH for TB prophylaxis for 6-12 months
• Oral Ganciclovir for CD4 depletion
(၄) Unknown effectiveness ထိရောက်မယ်လို့ မယူဆသည့်ဆေးများ
• Addition of Rifabutin to Clarithomycin + Ethambutol for MAC in people with previous MAC
• Famciclovir for Herpes simplex
• Itraconazole for Histoplasmosis
• TMP/SMX for Toxoplasmosis
(၅) Likely to be ineffective or harmful အကျိုးမရှိဟု ယူဆသော သို့မဟုတ် ဆိုးဝါးစေနိုင်သည့်ဆေးများ
• Clofazimine added to Ethambutol + Clarithromycin MAC in people with previous MAC
• Itraconazole for Cryptococcal meningitis
• Valaciclovir for Cytomegalovirus
ကာမအလှူ ( ၂၀၁၃ ) သွန်း ဆက် at 2:02 AM
adiba akter November 21, 2014 at 9:25 PM